Famolavolana sy lamina firavaka tsara vita ambony vita amin'ny vita vita tsara | Popular Jewelry
Mamadika ny Hevitra Hatramin'ny 1988
Noho ny fahaizany nandritra ny 28 taona nanamboarana ny indostria dia namorona singa tsy manam-paharoa tsy manam-paharoa firavaka tsara ho an'ny mpanjifanay ny orinasa. amin'ny Popular Jewelry, mirehareha amin'ny famolavolana ataontsika izahay ary mino fa ny lalana natao hamita ny andiany tsirairay dia manan-danja amin'ny alalàn'ny firavaka ihany. Hatramin'ny nanolorantsika ny metaly miolikolika, hatramin'izao fotoana izao dia ampiharinay eo amin'ny sombin-javatra ilay vita vita amin'ny polisa - tsy am-bavan'ny fahatsiarovana zava-kanto very Ny ekipanay manam-pahaizana manokana dia hiara-miasa aminao am-pitiavana hamolavola ny firavaka izay nofinofinao. Avy amin'ny namepika, avy amin'ny fehin-kibo, amin'ny volamena sy ny diamondra - hampidirintsika ho metaly sarobidy ny hevitrao — eritrereto ho paik'adinay King Midas.
Mamolavola & Mamorona firavaka anao
Amin'ny ankapobeny, manoro hevitra izahay mba handinika ireo fanontaniana fototra:
1. Inona ny karazana metaly sarobidy tianao ny hanaovana ilay singa vita?
Ohatra: (Platinum, volamena [24K, 22K, 18K, 14K, 10K], Volafotsy)
2. Karazana inona?
Ohatra: (Volamena mavo, mavokely volamena, volamena fotsy, mainty, sns)
(Ny rehetra / ampahany sasany)
3. Karazan-tsary (s) na polish / vita (es) tianao amin'ny sombinao:
Ohatra: Vita poloney, vita amin'ny Satin, vita amin'ny marika, vita amin'ny volavola, vita amin'ny landy, vita amin'ny famafana, Sandblasted Vita, sns.
4. Ny refy (azo tombanana) amin'ilay ampahany
Ohatra: (halavany x Width x Depth) milimetatra na refy
• Inona ny karazana vatosoa?
• Manao ahoana ny halehiben'ny vatosoa tsirairay?
• Aiza no tianao hapetraka?
6. Ny sokitra
• Karazan-taratasy manao taratasy?
Ohatra: Soraty taratasy / script
• Inona no tokony holazaina?
Ohatra: Daty, Initial, anarana, Quote sns ... (Aza adino ny elanelana misy alalana amin'ny alàlan'ny firavaka izay amboarinao)
Ny grills natao namboarina dia toy ny fanao arakaraka ny fanao mahazatra (tsara vintana mahita olona manana nify mifanentana aminao!) Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fanamboarana volamena namboarina (Grills), dia afaka mitsidika azy ianao. ny pejy natokanay.
Atombohy ny dia
Mba hahafahanay manampy anao bebe kokoa, dia manolo-kevitra mafy ny ho tonga eny an-toerana izahay any amin'ny Chinatown NYC. Ento miaraka aminao ny hevitrao sy ny modely, sary na sketsa misy azy. Ankoatr'izay, mety hiantso ianao (212) 941-7942 na mandefa mailaka anay ao info@popular.jewelry hametraka fanontanina na fangatahana teny hotsongaina. Manantena ny famoronana zavatra manokana aminao izahay.